‘शिक्षक अस्पताल बनाउने तयारी’
काठमाडौं–शिक्षा मन्त्रालयले शिक्षकहरुको लागि छुट्टै ‘शिक्षक अस्पताल’ बनाउने तयारी शुरु गरेको छ । यस अघि सेना, प्रहरी र निजामती कर्मचारीको छुट्टै अस्पताल भएपनि शिक्षकको भने थिएन । नेपाल शिक्षक महासंघले निरन्तर शिक्षक अस्पताल बनाउन दबाब दिँदै आएको थियो । शिक्षामन्त्री धनीराम पौडेलले शिक्षकहरुका लागि पनि छुट्टै अस्पताल बनाउनेबारेमा ‘तयारी भइरहेको’ बताउनुभयो । निजामति अस्पताललाई नै शिक्षकको पनि अस्पताल बनाउने कि छुट्टै शिक्षकको लागि मात्रै अस्पताल बनाउने भन्नेमा मन्त्रा ...
कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सर्ने
काठमाडौं–कक्षा ११ र १२ को परीक्षा सर्ने भएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन र परीक्षाको मिति जुधेपछि परीक्षाको मिति सर्ने भएको हो । स्थानीय निर्वाचन ३१ वैशाखमा हुने तय भएपछि कक्षा ११ र १२ को वार्षिक परीक्षा प्रभावित हुने भएको हो । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले छिट्टै नयाँ परीक्षा तलिका सार्वजनिक गर्ने जनाएको छ । निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तालिका सार्वजनिक गर्दै २५ वैशाखदेखि निर्वाचन अवधिभर विद्यालय बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ । स्थानीय निर्वाचन ३१ वैशाखमा र २५ गते देखि नै विद्यालयहरु बन्द ...
काठमाडौं–शिक्षा मन्त्रालयले गत ३० वैशाखदेखि रोकिएको शिक्षकहरुको जिल्लान्तर सरुवा फुकुवा गरेको छ । मन्त्रिस्तरीय निर्णय गर्दै मन्त्रालयले हालै जिल्लान्तर सरुवाको फुकुवा गरेको हो । मन्त्रालयको निर्णयसँगै शिक्षा विभागले पनि गत यही ८ फागुनमा सबै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयहरुमा जिल्लान्तर सरुवाको फुकुवा गरिएको जानकारी पठाइसकेको छ । शिक्षक सेवा आयोगले लिएको परीक्षामा उत्तीर्ण शिक्षकहरुको पदस्थापनाका लागि असर पर्ने भन्दै जिल्लान्तर सरुवा रोकिएको थियो । शिक्षकको प ...
काठमाडौं । स्थानीय तहको निर्वाचनको अवधिभर देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्था बन्द हुने भएका छन् । निर्वाचन आयोगले स्थानीय निर्वाचनको समयमा देशभरका सम्पूर्ण शैक्षिक संस्थाहरु बन्द गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । आयोगले निर्वाचन तयारीका सन्दर्भमा सरकारलाई दिएको १९ बुँदे निर्देशनमा आगामी बैशाख २५ गतेदेखि मतदान सम्पन्न नभएसम्म विद्यालयमा पठनपाठन, परीक्षा सञ्चालन लगायत सबै शैक्षिक क्रियाकलापहरू नगर्न भनिएको छ । साथै, आयोगले सामुदायिक विद्यालयमा कार्यरत शिक्षकको अद्यावधिक विवरण एक साता भित्र आयोगला ...
४० लाख विद्यार्थी जोखिमपूर्ण भवनमा
काठमाडौं–नेपालमा महाभूकम्प गएको २२ महिना बितेको छ । भूकम्पले सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, गोरखा, धादिङ, काभ्रे, दोलखालगायत १४ जिल्लाका करिव सात हजार विद्यालय भवन ध्वस्त बनायो । ध्वस्त बनाएको ठाउँमा त भूकम्पप्रतिरोधी पुनर्निर्माणका योजना बनिरहेकै छ तर अरु जिल्लाहरुमा भूकम्पीय धक्काले जोखिमपूर्ण बनाएको र तिनै भवनहरुमै विद्यार्थी पढिरहेकोप्रति भने कसको कति ध्यान पुगेको होला ? यिनै विषयमा चिन्ता व्यक्त गर्दै बुधबार ललितपुरमा ‘विद्यालयमा बाल सुरक्षा’का विषयमाथि नीतिगत छलफल भयो । जहाँ शि ...
काठमाडौं–अभिभावकहरुको छाता संगठन अभिभावक महासंघ बनाउन आयोजक समिति गठन भएको छ । अभिभावक संघ नेपाल र राष्ट्रिय अभिभावक संघ दुबै तर्फका नौ–नौ जनाको १८ सदस्यीय ‘महासंघ निर्माण आयोजक समिति’ बनाइएको हो । बुधबार अभिभावक संघ नेपालका तर्फबाट उपाध्यक्ष सरिता अर्याल र राष्ट्रिय अभिभावक संघका अध्यक्ष धर्मदत्त देवकोटाको नेतृत्वमा बसेको दुबैतर्फका प्रतिनिधि मण्डलको बैठकले आयोजक समिति घोषणा गरेको हो । ‘यो समितिले दुईटा काम गर्नेछ,’ अभिभावक संघकी उपाध्यक्ष अर्यालले भन् ...
अहिले फागुन लागिसक्दासमेत जनक शिक्षाले एक करोडको हाराहारीमा मात्रै पुस्तक छापेको छ । ६ देखि १० कक्षासम्मको पुस्तक छाप्ने जिम्मा पाएको जनकले दुई करोड थान छाप्नुपर्नेमा अझै एक करोड किताब छाप्नै बाँकी छ । जबकी सम्बन्धित बिक्री डिपोहरुमा पुर्याउनु त परै जावस् । शिक्षा संवाददाता/काठमाडौं जब नयाँ शैक्षिक सत्र शुरु हुन थाल्छ तब पाठ्यपुस्तकका मुद्दा जोडतोडले उठ्ने गर्छ । वर्षभरी निदाएर बस्ने जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रका अधिकारी ...
तराई बन्दमा विद्यालय सञ्चालन हुन दिन माग
काठमाडौं । बालबालिका शान्तिक्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप)ले तराई बन्दमा विद्यालय सञ्चालन हुनदिन माग गरेको छ । सिजोपले स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै मधेशी मोर्चाले घोषणा गरेको फागुन ११ गतेको तराइ बन्दमा विद्यालय शान्तिक्षेत्रको मर्मअनुसार विद्यालयललाई स्वस्फूर्त रुपमा सञ्चालन हुन दिन मोर्चासँग माग गरेको हो । सिजोपले मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै विभिन्न माग राख्दै गरिने बन्द, हड्ताल जस्ता कार्यक्रम आह्वान नगरी वैकल्पिक माध्यम अपनाई दिन र विद्यालय शान्तिक्षेत्र राष्ट् ...
प्याब्सनमा को–को भए निर्वाचित ?
काठमाडौं । निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन) नेपालको अध्यक्षमा विजय सम्बाहाम्फे निर्वाचित हुनुभएको छ । प्याब्सनको तेह्रौँ राष्ट्रिय महाधिवेशनले सम्बाहाम्फेको अध्यक्षतामा ६७ सदस्यीय केन्द्रीय कार्यसमिति निर्वाचित गरेको छ । निर्वाचनमा सम्बाहाम्फे १२० मत अन्तरले विजयी हुनुभएको हो । गएराति सम्पन्न मतगणनाको परिणामअनुसार कुल एकहजार ६२३ मतमध्ये सम्बाहाम्फेले ८७१ र निकटतम प्रतिद्वन्द्वी टीकाराम पुरीले ७५१ मत प्राप्त गर्नुभयो । को-को भए निर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष– डिके ढुंगानामहासचिव ...
काठमाडौँ । चन्द्रागिरि नगरपालिकाको थानकोटस्थित मङ्गोलदय माविले स्वर्ण जयन्ती महोत्वस मनाउने भएको छ । विद्यालयले आज यहाँ पत्रकारसम्मेलन गरी यही फागुन १४ गते स्वर्ण जयन्ती महोत्वस मनाउने जानकारी दिएको छ । सो दिन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट महोत्सवको उद्घाटन गरी संस्थापक एवम् योगदानदातालाई सम्मान गरिने कार्यक्रम रहेको विद्यालयका प्रधानाध्यापक लीलानाथ शर्माले बताउनुभयो । सो अवसरमा विद्यालयलको नवनिर्मित भवन पनि उद्घाटन गरिनेछ, उहाँले भन्नुभयो– विसं २०२३ मा स्थापित यो विद्यालय राम्रो नतिजा ...
काठमाडौं । शिक्षक सेवा आयोगले निम्न माध्यमिक तहको खुला तर्फको लिखित परीक्षाको पुनर्योगको नतिजा सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले निम्न माध्यमिक तहको गणित, गणित विज्ञान, विज्ञान र नेपाली विषयको पुनर्याेगको नतिजा सार्वजनिक गरेको हो । प्रकाशित नतिजामा चित्त नवुझी पुनर्योगका लागि निवेदन दिएका वस्तुगत, विषयगत खण्ड 'क' र खण्ड 'ख' को उ.पु. मा दिएको प्राप्तांक र मार्कस्लिप समेतको जोड जम्मा रुजु गर्दा आयोगवाट प्रकाशित लिखित परीक्षाको नतिजामा तात्विक फरक नपरेको समेत आयोगले जनाएको छ । ...
काठमाडौं । विद्यार्थी संगठनहरूले स्ववियु चुनाव लक्षित गरी नारा लेखेका सार्वजनिक भित्ता अझै मेटिएका छैनन् । त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गतका क्याम्पसहरूमा १८ फागुनमा स्ववियु चुनाव हुने घोषणा भएपछि प्रचारप्रसारका लागि विभिन्न विद्यार्थी संगठनले आचारसंहिताविपरीत सार्वजनिक भित्ता तथा पर्खाल रंगाएका थिए । त्रिविले जारी गरेको स्ववियु चुनाव आचारसंहितामा भित्तेलेखन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यदि लेखेको भए स्वयं मेट्नुपर्ने उल्लेख छ । निर्वाचनसम्बन्धी तुल, फ्लेक्स र कुनै पनि प्रकारको पोस्टर टाँस्न नपाइने ...
जाजरकोट । जाजरकोटको एक दुर्गममा रहेको सामुदायिक विद्यालयका अध्यक्ष प्रत्येक दिन विद्यार्थीसँग विद्यालय पुग्छन् । विद्यार्थीको प्रार्थनाको समयमा आफैँ उपस्थित हुने गर्दछन् । विद्यार्थीको हाजिरीसमेत प्रार्थनाको समयमा लाइनमा हुने गर्दछ । यो विद्यालय हो, मालिका प्रावि थालारैकर–८ सुगरखाल । यो विद्यालय कक्षा १ देखि ५ सम्म सञ्चालनमा रहेको छ ।यहाँका प्रधानाध्यापक र अन्य शिक्षक ठीक १० वजे विद्यालय नआएमा विव्यस अध्यक्ष भक्तबहादुर थापाले निःशुल्क पढाउन लगाउने गर्दछन् । विद्यालय उपस्थित नहुने विद्यार् ...
अनुमति बिना सञ्चालित १९ विद्यालय कार्बाहीमा
चितवन । अनुमति बिना कक्षा सञ्चालन गर्ने जिल्लाका १९ निजी विद्यालयलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालय चितवनले कारबाही गरेको छ । शिक्षा नियमावलीअनुसार कारबाही गरेर त्यहाँ अध्ययनरत् विद्यार्थीले कुन ठाउँमा परीक्षा दिने र कुन ठाउँबाट प्रमाणपत्र लिने सबै जानकारी दिन समेत निर्देशन दिइएको जिल्ला शिक्षा अधिकारी गोविन्द अर्यालले जानकारी दिनुभयो । अर्यालका अनुसार चितवनका ती विद्यालयले कम्तीमा एकदेखि पाँच वटा कक्षासम्म अनुमति बिना सञ्चालन गरेको पाइएको छ । यसरी कक्षा सञ्चालन गर्ने सबै आधारभूत तह पढाउने विद्यालय रहे ...
वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरापमा
धरान । वीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपकुलपतिको नियुक्तिमा ढिलाई हुँदा क्यान्सर र मुटु रोगको उपचारका लागि सरकारले दिएको १८ करोड रुपैयाँ फिर्ता हुने अवस्था सृजना भएको छ । प्रतिष्ठानमा मुटु रोग उपचार केन्द्रकालागि १५ करोड रुपैयाँ र क्यान्सर उपचार केन्द्रको आधुनिक भवन निर्माणकालागि ३ करोड दिएको थियो । मुटु र क्यान्सरको उपचार केन्द्रकालागि बोलपत्र समेत निकालेर मुल्याङ्कन समेत गरी सकिएको भएपनि स्वीकृत गर्ने अधिकार उपकुलपतिलाई मात्र भएको तर उपकुलपति नियुत्ती नहुँदा म्याद गुज्रन लागेको र ...
कपिलवस्तुमा आधाभन्दा बढी विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन नै भएन
जानु पाण्डे/कपिलवस्तु कपिलवस्तुका आधा विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठन हुन बाँकी रहेका छन् । शिक्षा मन्त्रालयले माघ मसान्तसम्म समिति गठन हुन पत्राचार गरेपनि यहाँका कतिपय विद्यालयले चासो देखाएका छैनन् । केहीले सहमति गराउने नाममा र केही विद्यालयले गठन प्रक्रिया शुरु गरेका छैनन् । यहाँका १३ विद्यालयमा व्यवस्थापन समिति गठनको सुरसार नै छैन । नियम पालन गर्नका साटो आफ्नो आयु लम्ब्याउन पदाधिकारीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा हालेका छन् । केही मेसो नमिलेपछि उनीहरु मुद्दाको आडमा व्यवस्थापन समिति लम्ब ...
टुँडिखेलमा नौलो परीक्षा !
काठमाडौं-काठमाडौंको टुँडिखेल । समय थियो बिहान ११ः३० को । विभिन्न रङ्गमा विद्यालय पोशाक लगाएका कलिला बालबालिका खाली चौरमा कापी–कलम लिएर बस्न थाले । त्यो एक–दुई सयको समूह थिएन । हजारौं थिए । ती थिए परीक्षा दिन लामबद्ध विद्यार्थी । जहाँ एकै समयमा आठ हजार विद्यार्थीले एकसाथ परीक्षा दिए । काठमाडौं उपत्यकाका तीन सय २५ विद्यालयका आठ हजार विद्यार्थी यसमा सहभागी भए । यो घटनालाई दर्शकहरुले निकै नौलो र रोचक माने । ‘स्वामी विवेकानन्द संस्कृति ज्ञान परीक्षा’को नाम दिइएको ...
प्याब्सनमा पनि दलीय प्रतिस्पर्धा !
काठमाडौं – निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेशन (प्याब्सन)को आसन्न महाधिवेशनका लागि चुनावी प्रतिस्पर्धा तीब्र बनेको छ । प्याब्सनका नेताहरु दलीय प्यानल बनाएरै चुनावी प्रतिस्पर्धामा होमिएका छन् । सत्ता साझेदार माओवादी र कांग्रेस निकटको एउटा र प्रमुख प्रतिपक्ष एमाले समर्थक अर्को प्यानल बनेको छ । दुबै प्यानल चुनावी घोषणा र प्रतिबद्धतासहित मैदानमा उत्रिएका छन् । दुबै प्यानलले चुनावी घोषणा पत्रमा प्याब्सनलाई समृद्ध, विज्ञ तथा प्राज्ञिक संगठन बनाउने, निजी विद्यालयहरुको शैक्षिक विकास, लगानीको सुर ...
प्राविधिक शिक्षाबारे दुईदिने अभिमुखीकरण
काठमाडौँ । सार्वजनिक शिक्षाको गुणस्तरवृद्धिका लागि एक्काइशौँ शताब्दी अनुकूल रोजगारमूलक प्राविधिक शिक्षासम्बन्धी दुइदिने अभिमुखीकरण सम्पन्न भएको छ । ‘ग्लोबल पिस फाउन्डेसन’ (जिपिएफ) र विभिन्न संस्थाको आयोजनामा सम्पन्न दुईदिने शैक्षिक सम्मेलनमा सीपमूलक र व्यावसायिक शिक्षाका लागि निजी क्षेत्रसँग सहकार्यलाई पनि बढाउँदै विद्यालयको कक्षा कोठाको सुधारमा ध्यान दिन जोड दिइएको थियो । अभिमुखीकरणमा निजी तथा सरकारी विद्यालयका प्रधानाध्यापक तथा शिक्षकहरु सहभागिता रहेको थियो । निजी विद्यालयका ...